မြန်မာပေါကားတိုင်းမှာ မပါမဖြစ် ပါရတဲ့ ပုံသေနည်း သရုပ်ဆောင်ကွက်များ အကြောင်း – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > မြန်မာပေါကားတိုင်းမှာ မပါမဖြစ် ပါရတဲ့ ပုံသေနည်း သရုပ်ဆောင်ကွက်များ အကြောင်း
မြန်မာပေါကားတိုင်းမှာ မပါမဖြစ် ပါရတဲ့ ပုံသေနည်း သရုပ်ဆောင်ကွက်များ အကြောင်း
မြန်မာပေါကားတိုင်းမှာ မပါမဖြစ် ပါရတဲ့ ပုံသေနည်း သရုပ်ဆောင်ကွက်များ အကြောင်း ( သူငယ်ချင်းများ… မင်းသား၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်စေ၊ မင်းသမီး၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်စေ..အလုပ်မရှိရ။ မိမိသူငယ်ချင်း မင်းသားမင်းသမီး၏ အချစ်ရေးမှတပါး ဘာမှမပြောရ၊ စိတ်မဝင်စားရ။ )
ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာ… အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ ဝတ်ထားရမည်။ အတွင်းရေးမှူး… မိန်းကလေးသာဖြစ်ရမည်။သူလည်း အနောက်တိုင်းဝတ်စုံဝတ်ရမည်။ ရှယ်ရာဝင်လုပ်ငန်းရှင်များ… အစည်းအဝေး တက်ရမည်။
ယင်းအစည်းအဝေးတွင်လုပ်ငန်းများအား…သားဖြစ်သူ မင်းသား သို့မဟုတ် သမီးဖြစ်သူမင်းသမီးအား လွှဲအပ်ကြောင်း ပြောမည်။ ကားဒရိုင်ဘာ… အင်္ကျီအနွမ်းဝတ်ရမည်။ တဘက်ကလေးကို ပခုံးပေါ် တင်ထားရမည်။ ကားရေဆေးနေရမည်။အိမ်ဖော် ထမင်းချက်…. ဟင်းရွက်သင်နေရမည်။
မင်းသား မင်းသမီးက ခေါ်လျင် ကိုကိုလေး..မမလေး..ဟုထူး၍ ပြေးလာရမည်။ သူငယ်ချင်းများ… မင်းသား၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်စေ၊မင်းသမီး၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်စေ..အလုပ်မရှိရ။
မိမိသူငယ်ချင်း မင်းသားမင်းသမီး၏ အချစ်ရေးမှတပါး ဘာမှမပြောရ၊ စိတ်မဝင်စားရ။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ… ကင်တင်းသာထိုင်ရမည်။ ဟေးလားဝါးလားလုပ်ရမည်။ စာအကြောင်းမပြောရ။
ဘာမှမပါသော လွယ်အိတ်သာ လွယ်ရမည်။ ဆင်းရဲသားဖြစ်လျင် စာတော်ရမည်။ မိခင်သည် အကြော်သည်ဖြစ်ရမည်။ ဆယ်တန်းအောင်စဉ်က ဂုဏ်ထူးပါရမည်။ အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ သားရယ်… ကျောင်းဆက်တက်ပါ..အမေရှာနိုင်ပါတယ်ဟု ပြောရမည်။ ရွာသူကြီး… တပည့် နှစ်ဦးခန့်နှင့်၊ ဇနီးနှင့် အိမ်ရှေ့တွင် တန်းလျားချကာ ထိုင်ရမည်။
ရေနွေးကရားမှလွဲ၍စားပွဲပေါ်တွင် ဘာမှ မရှိစေရ။ အစည်းအဝေး ခေါ်လျင် ၁၀ ဦးထက်မပိုရ။ တစ်ရွာလုံးဟု ဆိုသော်လည်း ရွာသားများမှာ ၁၀ ဦးမကျော်ရ။အစည်းအဝေးတွင် မင်းသားတစ်ဦးသာ ဦးနှောက်ရှိစေရမည်။ စာရေးဆရာ၊ကဗျာဆရာ… အင်္ကျီအဖြူ ၊ပုဆိုးဝတ်၍
မျက်မှန်ထူထူ တပ်ရမည်။ အူကြောင်ကြောင်အမူအရာ ရှိရမည်။ အူတူတူ အတတ ဖြစ်ရမည်။ စာရေးဆရာမလည်း အတူတူ။ ကျောင်းဆရာမ… ကြိမ်ခြင်းကိုင်ရမည်။
ကလေးများက ပြေးလာကြိုရမည်။ ပန်းပေးရမည်။ချက်ခြင်းပန်ရမည်။ တောသူမ… အပေါ်အောက်အင်္ကျီ အကွက်လက်တို ဝတ်ရမည်။ဆံပင်နှစ်ဖက်စည်းရမည်။ ပါးကွက်ကွက်ရမည်။ တစ်ယောက်တည်းလာလျှင် ပန်းပွင့် သို့မဟုတ် မြက်ပင်ကိုင် လှည့်၍
ခုန်ပြေးလာရမည်။ နောက်ခံတီးလုံးက ပလွေသံ……။ တောသား… သနပ်ခါးပါးကွက်ကွက်ရမည်။ ပုဆိုးစလွယ်သိုင်းရမည်။ လူကြမ်းတောသားက ထန်းတောထဲမှာ ထန်းရည်သောက်ရမည်။
တောသား၊တောသူများ မြို့တက်လျင် ထန်းခေါက်ဖာ..ပါရမည်။ မျဉ်းကြား ဖြတ်ကူး၍ ယာဉ်ထိမ်းရဲ အဖမ်းခံရမည်။ ရဲစခန်းမှူး…. စခန်း၌သာ နေရမည်။ကုလားထိုင်မှ ထိုင်ရာမထ ဆုံးဖြတ်ရမည်။ မျက်နှာသေနှင့် စာကျက်ထားသလိုစကားပြောရမည်။
လက်အောက်တပည့်က တစ်ဦးသာရှိရမည်။ ထိုတစ်ဦးမှာလည်း အလေးပြု၍ သတင်းပြောရုံသာ လုပ်ရမည်။ ဈေးသည်၊ငါးစိမ်းသည်… ခေါင်းပေါင်းရမည်။ပါးကွက်ကျားကွက်ရမည်။ ဗန်းထဲ၌ ငါးအနည်းငယ်ထည့်ထားရမည်။ စကားပြော ကြမ်းရမည်။ရန်ဖြစ်ရမည်။
လူဆိုး… ဘောင်းဘီရှည် ဝတ်ရမည်။ ခေါင်းဆောင်က လောင်းကုတ်ဝတ်ရမည်။ မျက်မှန်အမည်းတပ်ရမည်။ ဦးနှောက်မရှိစေရ။ မင်းသားပါလျင် ကိုယ်ခံပညာပိုတော်သဖြင့် ခေါင်းဆောင်ကသဘောကျရမည်။ ခေါင်းဆောင်၌ နှမရှိလျင် မင်းသားနှင့် ကြိုက်ကိုကြိုက်ရမည်။ မင်းသမီးက စ ကြိုက်ဖို့ များသည်။
ဝပ်ရှော့ဆရာ… ကားအောက်၌သာ ပက်လက်နေရမည်။ စကားပြောစရာရှိလျင်..ဆီပေသောအင်္ကျီနှင့် ထွက်လာရမည်။ အခြောက်…. ဇာတ်ကားတိုင်း မပါ မဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ လူမမာ အမေ၊အဖေ…. ချောင်း..သာ…ဆိုးရမည်.. ရင်ဘတ်ကိုနှိပ်ရမည်။ စကားကို
တစ်လုံးချင်း ဖြည်းဖြည်း ပြောရမည်။မော…ရမည်။ သေခါနီးသော်လည်း ပြောစရာကို ပြီးအောင်ပြောပြီးမှ သေရမည်။ ယောကျ်ားလျာ.. … ဆံတု တိုတို တပ်ရမည်။ ခင်ဗျား…ကျနော်…ပြောရမည်။
တီရှပ် လက်တို ဝတ်ရမည်။ လက်သီးနှင့် ထိုးတတ်ရမည်။ ကလေးများနှင့် ဆော့ရမည်။ ထိုကလေးများသည် ယောကျားလေးများ ဖြစ်ရမည်။ လေးဂွလည်း ပါတတ်သည်။ မိဘများ… အဖေသည် သတင်းစာ ဖတ်ရမည်။
အမေက ဘေးမှာ ထိုင်ရမည်။ ဟော….သမီးလေးတောင် ပြန်လာပြီ..ကိုး….ဟု မဖြစ်မနေ ပြောရမည်။ သတိရလျင်…ဆက်ရေးပါမည်.
Previous Article အမျိုးသမီးတို့၏ မျက်နှာပေါ်မှ ကောင်းသောနေရာတွင်ရှိသည့် မှဲ့ အမျိုးအစား (၁၀) ခု
Next Article ကမ္ဘာကျော်လက္ခဏာဆရာကြီး ကိုင်ရို ဟောကိန်းနဲ့ အနာဂတ်မြန်မာပြည်ကြီး၏ အလွန်းအားရဖွယ်ကောင်းသော အချက်များ